Fanondranana olona an-tsokosoko :: Hiara-hikaroka ireo Sinoa dimy voampanga ny PAC sy ny Masoivohon’i Shina • AoRaha
Fanondranana olona an-tsokosoko Hiara-hikaroka ireo Sinoa dimy voampanga ny PAC sy ny Masoivohon’i Shina
Raikitra ny raharaham-pitsarana andiany fahefatra eny anivon’ny Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) 67Ha. Raha­raha fandefasana olona an-tsokosoko hiasa any ivelany izay niampangana Sinoa miisa dimy sy Malagasy miisa efatra, no niakatra Fitsarana omaly.
Tsy tonga anefa ireo olona voarohirohy ireo ka voatery nahemotra amin’ny alatsinainy 28 oktobra ho avy izao ny Fitsarana, araka ny fampitam-baovao nomen’ny lehiben’ ny Fampanoavana ao amin’ny PAC 67Ha, Razafindrakoto Solofohery.
Nohazavainy fa: “tsy tonga niatrika ny Fitsarana ireo voampanga ireo na dia efa nampandrenesina mialoha sy nomena toromarika mba tsy hiala lavitra an’Antananarivo aza. Nandritra ny ora maro no niandrasana azy ireo ho tonga tety amin’ny PAC 67Ha saingy tsy nipoitra mihitsy ry zareo. Voatery niantso ny masoivohon’ny firenena sinoa izahay ka tapaka taorian’ny fifampiresahana fa hahemotra amin’ny 28 oktobra izao ny fitsarana an’ireo Sinoa dimy sy Malagasy efatra ireo. Hifa­nome tanana hitady an’ireo olona ireo kosa ny PAC sy ny masoivohom-pirenena Sinoa”.
Ankoatra izay, dia raha­raha halatra mitam-piadiana iray saika hotsaraina teny amin’ny sampana ady heloka bevava, teny amin’ny PAC 67Ha, koa no nafindra any amin’ny Fitsarana, etsy Anosy. “Rehefa nodinihina ny raha­raha dia ny Fitsarana eny Anosy no tandrify kokoa sy tokony hiandraikitra izany”, hoy hatrany Razafindrakoto Solofohery.
Amin’ny zoma ho avy izao no hifarana ny raharaham-pitsarana andiany fahefatra hatao eny amin’ny PAC 67 Ha. Raharaha miisa valo izay ahitana fanondranana olona an-tsokosoko, fano­dinkodinana volam-panjakana, fakàna an-keriny ary fanaovana vola sandoka no hiakatra Fitsarana, ankoatra ireo roa tokony ho novitaina omaly. Voampanga mahe­rin’ ny telopolo no voarohirohy amin’izany, araka ny fantatra.
“Tsy mbola hiakatra amin’ ity raharaham-pitsarana andiany fahefatra ity ireo voatondro ho olobe mpanao kolikoly satria mbola misy hanaovana fanadihadiana ny sasany amin’izy ireo. Tsy maintsy vita alohan’ny faran’ity taona 2019 ity ireo anefa ny fitsa­rana an’ireo raharaha ambiny ireo”, hoy hatrany ny lehiben’ ny fampanoavana ao amin’ny PAC 67 Ha.
Fanadinana bakalorea teknika :: Takin’ireo mpampianatra ihany koa ny hisian’ny fihodinana faharoa
Fivoriana tetsy Tsimbazaza :: Mitaky fanajana fitsipika Razanamahasoa Christine